Jona 23, 2011 amin'ny 1:06 am
Manantena aho fa ho fanafahana ny manaraka fa ny parser.php configurable safidy ho amin'ny toe-javatra toy izany plugin tsy maintsy averina atao azy ireo, rehefa Hanavao. Ireo no safidy lehibe!
Jona 23, 2011 amin'ny 10:53 am
Tsy ny zava-drehetra dia ho configurable, Rehefa manao tsy mitady ny manafotra ny mpampiasa maro be safidy, ihany koa – amin'izao hevitra mitandrina izany endri-javatra izany ny mpampiasa mandroso kokoa izay mety hahatakatra tsara kokoa izay hitranga sy ny fotoana manantena, ary tsy mahatsapa fa matotra ampy ho lasa anisan'ny fototra lehibe, fara fahakeliny, tsy amin'izao fotoana izao.
Misaotra noho ny fanehoan-kevitra na
Jona 24, 2011 amin'ny 8:00 aho
Afaka hahatakatra fa ny safidy matotra mba tsy ho ampy ny hanampy ny fanahafana (-tsaina matetika ny mahita fanahafana safidy eo amin'ny rindrambaiko izay nanasongadina toy ny “beta” na “fanandramana”, sns. – ka misy alohan ' – Na dia ao Transposh efa) Toy ny tsy te “manafotra” ny mpampiasa, rehetra noho fanajana, Tsy mividy ny fanehoan-kevitra amin'ny rindrambaiko fanahafana. Raha ny tena izy, Tsy afaka milaza fa nahita ny safidy Transposh tahaka izy ireo 100% mazava. Izany no Aza manahirana ahy. Mandany fotoana fotsiny aho indray namaky mandra-Azoko tsara. Fantatro fa misy no mino dia be aza ny rindrankajy izay mila “hitandrina izany tsotra”, fa mandeha manovaova ny asa tanana-in-tanana amin'ny pitsiny. Izay no tsotra varotra-eny amin'ny teknolojia. Translation fanodinana no tena hoe sarotra. Tsara kokoa ny miezaka ny fitantanana ny fahasarotana sy handahatra / nanazava ny safidy araka izay tsara indrindra vitanao, toy izay “afeno” azy ireo.
mazava, Tena faly aho amin'ny safidy ireo ary raha ny olona mandray anjara amin'ny fandikan-teny tsy tapaka Transposh mampiasa ny fomba dia, Aho dia mahita azy ireo ilaina amin'ny asa sy Transposh sarotra ny fampiasana tsy misy azy ireo. Nahoana raha hanokatra azy ho amin'ny olona maro kokoa?
Tsy miezaka ny ho tia ady eto, fa “hitandrina izany tsotra” dia iray amin'ireo bokotra mahamay ahy. Miala tsiny ianao namely azy! 😉
toy ny milaza
Jona 24, 2011 amin'ny 5:59 am
ny fomba hametraka Sitemap amin'ny Mod ity?
Jona 24, 2011 amin'ny 7:55 am
Jona 25, 2011 amin'ny 12:01 am
Damba ity dia tsy miasa ho ahy. Rehefa mampakatra Sitemap-core.php ary tsindrio hanorina indray ny Sitemap “XML Sitemap Generator” milaza:
# Ny farany fa tsy mahavita mihazakazaka! Angamba afaka manangana ny fahatsiarovana na ny fotoana voafetra ho an'ny PHP soratra. Hamantatra bebe kokoa
# Ny fitadidiana fantatra farany fampiasana ny soratra dia 36MB, ny fetra ny mpizara dia 256M.
# Ny fantatra farany famonoana fotoana ny soratra dia 133.07 segondra, ny fetra ny mpizara dia 120 segondra.
# Nijanona ny teny manodidina Lahatsoratra isa 1716 (+/- 100)
Jona 25, 2011 amin'ny 12:09 am
Soso-kevitra ihany aho, na dia afaka nanangana ny fotoana voafetra ho amin'izany soratra na nifindrany tany Bible 4 izany plugin
Jona 30, 2011 amin'ny 12:50 am
Jona 30, 2011 amin'ny 11:57 am
Misaotra noho ny fizarana izany, there should probably be a better interface to that coming in some future version 🙂
Bharat Balegere milaza
Jolay 4, 2011 amin'ny 4:07 aho
Tsy mifanaraka amin'ny Transposh Hypercache?
I Aleon'ny mampiasa Hypercache ny Super cache.
Hypercache manana be dia be ny safidy ho an'ny invalidating cache.But tsy tsara ny mampiasa izany ho amin'ny Transposh.
Jolay 4, 2011 amin'ny 1:12 am
Tsy mbola pitsapana ity, fa angamba mety miasa, ny tsy fisian'ny invalidation mety hahatonga ny olona sasany ho olana reposting fandikan-teny, fa izahao toetra izany, ny mileage dia miovaova
Little Red Sahona milaza
Jolay 11, 2011 amin'ny 11:45 aho
Manana aho 2 fanontaniana…
1) Te-hanoratra indraindray ny lahatsoratra amin'ny teny anglisy, ary avy eo dia nandika azy ho amin'ny teny Frantsay, ary indraindray amin'ny teny Frantsay, ary avy eo nandika azy ho any anglisy. Moa ve azo atao sy ny fomba?
2) Te-ho irery ihany no ho afaka handika ny lahatsoratra sy te ny safidy tsy hiseho eo amin'ny pejy an-tserasera. eto indray, mety hitranga ve izany, ary ahoana no?
Jolay 12, 2011 amin'ny 11:46 am
1. Mila mampiasa ny tp_language ao amin'ny Meta Lahatsoratra
2. Vao avy nametraka fandikan-teny alalana Admin, dia hiseho eo amin'ny pejy an-tserasera, fa tsy noho ny mpampiasa
Jolay 14, 2011 amin'ny 10:15 aho
No nangatahako anao im-betsaka, fa tsy hahazo na valin. na dia, efa nanaisotra ny fanehoan-kevitra rehetra.
Efa nametraka plugin, config sy manampy Widget soa aman-tsara. Na izany aza, rehefa tsindrio raha teny manokana, dia manana fahadisoana:
Ny pejy miezaka ny hijery tsy azo aseho satria mampiasa ny tsy manan-kery na sokafana amin'ny teny famatrarana.”
Azonao atao ny mijery ny toerana, ka trarantitra ianao, aoka aho mahalala ny vahaolana.
Jolay 19, 2011 amin'ny 2:09 aho
Efa niezaka ny mandefa anao toy izany im-betsaka, azafady manome ny adiresy mailaka miasa ao amin'ny fanehoan-kevitra raha te-hahazo valiny indraindray, Izaho koa mba ta fahazoan-dalana hidirana ny amin'ny spam lahatahiry mijery afa-po indraindray raha miandry ny na inona na inona ny zava-dehibe, anyhow – ianao vao nahazo valiny eto, gzip olana, angamba amin'ny toerana olana eo amin'ny toerana na ny mifanohitra plugin
Jolay 18, 2011 amin'ny 5:06 am
Ho ahy dia ny olana amin'ny plugin “gzip famatrarana”. Miezaha mankarary azy io mba hahitana raha izay mamaha ny olan'ny
Jolay 23, 2011 amin'ny 7:19 am
Misaotra anao noho Transposh sy Ilyo ny valinteny!
Tsy fantatro rehefa hanampy gzip famatrarana, angamba izany ao anatin'ny WP Super cache na W3 tanteraka cache ? Ary izao, ahoana no ahafahako mankarary azy? Mba ampio!
fanontaniana iray hafa, Efa nametraka ihany koa ity toerana plugin hafa, Efa tsara eo anatrehan'i. Na izany aza, from omaly, dia efa niseho ny fotsy pejy rehefa tsindrio raha teny manokana. Koa inona no olana?
Ampio aho azafady! Misaotra be dia be ry zalahy rehetra!
Jolay 28, 2011 amin'ny 10:38 aho
Tsy tena hanampy anao zavatra maro mikasika ny ny gzip, izany dia zavatra atao amin'ny mifanohitra fanahafana izay tsy mahafantatra.
Ny banga pejy dia tokony ho tapa-kevitra amin'ny fampitomboana ny Fi fitadidiana fetra.
Jolay 28, 2011 amin'ny 9:50 aho
Rahoviana isika no mahazo ny fanavaozana ny 3.2.1?
Tiako ny Fandikan-Plugin sy te hametraka izany ny vaovao WP-Version
Jolay 28, 2011 amin'ny 10:32 aho
Tsara, dia miasa amin'ny 3.2.1. Ity takelaka ity dia mihazakazaka 3.2.1, Angamba hanova ny readme.txt ela ampy.
Jolay 29, 2011 amin'ny 1:47 am
ok… Tss.. miaraka amin'ny foto-kevitra (mondeo – avy amin'ny foto-kevitra hitsikitsika-) dia doesn't miasa .Only ny backend dia ho tanteraka adika, but in frontend it doesn´t work 🙁
Jolay 29, 2011 amin'ny 1:53 am
ok, rehetra indray… ankehitriny dia efa nahazo azy.
Tiako ny plugin !!!
Miala tsiny fa ny lahatsoratra roa sosona…
Jolay 29, 2011 amin'ny 3:50 am
Faly handre tsara ny zava-drehetra dia izao